Kedu ihe na otu esi arụ ọrụ nchekwa nchekwa ọrụ? Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Sistem nchekwa nchekwa
Portillo nke German | | Nchekwa ike
Kemgbe a malitere iji ike ọhụrụ eme ihe, nsogbu dị adị ma na-adịgide. Usoro nchekwa nke ume. Ike imeghari ohuru nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma ma a bịa n’ịzụ elu ike. Agbanyeghị, nsogbu ọ na - eweta bụ nchekwa ya. Nke nta nke nta, sayensị na-etolite sistemụ nchekwa nchekwa na-arụ ọrụ nke ọma na-enyere aka imegharịwanye.
Chọrọ ịma ka nchekwa nke ume ọkụ ọkụ si arụ ọrụ? N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile. Naanị ị ga-anọgide na-agụ 🙂
1 Gịnị bụ usoro nchekwa?
2 Systemsdị usoro nchekwa
3 Ihe kpatara na ikwesiri ịchekwa ike
4 Ina na nchekwa
5 Chekwa ume abụghị ihe ọhụrụ
Gịnị bụ usoro nchekwa?
Ndị a bụ sistemụ nke eji echekwa ụdị ike ọ bụla ma nwee ike ịhapụ ya mgbe ọ dị mkpa. A bịa n’ịhapụ ike ya, ọ gaghị adị otu ụzọ ahụ echekwara ya. Dịka ọmụmaatụ, kpochapụla ndụ batrị bụ ụdị usoro nchekwa nchekwa ike.
N'ụzọ dị otú a, anyị na-achịkwa iji chekwaa ume maka egbula ya ma jiri ya rụọ ọrụ nke ọma dịka o kwere mee. Ọ dị ezigbo mkpa maka ụlọ ọrụ eletrik na ndị na-azụ ahịa nwere ike iji ike mee ihe mgbe ha chọrọ ya. Ya mere, sistemụ ndị a ga-emerịrị oge ọ bụla iji nwekwuo nnweta.
Enwere ike iji ihe nchekwa nchekwa ume n'ọtụtụ ebe. Ọ bụghị naanị na echere na ebe obibi na ndị na-azụ ahịa na-achọ. Dị nnọọ iche. Usoro mmepụta ihe buru ibu, dị ka osisi ọgbọ, dịkwa mkpa maka usoro nchekwa.
Systemsdị usoro nchekwa
Dabere na ikike dị adị ma a bịa n'ịchekwa ike, anyị na-amata ọdịiche dị n'etiti usoro 3 dị iche iche:
Nnukwu nchekwa. A na-eji usoro a maka ebe ndị a na-eji akpịrị GW eme ihe. N'ebe ndị a, ọ dị mkpa iji chekwaa ike maka usoro ọgbọ, usoro mberede na ndị inyeaka. Dịka ọmụmaatụ, a na-eji ya na osisi hydroelectric iji kwalite nsụda mmiri.
Nchekwa netwọk. A maara ya nke ọma maka ike na-agbanwe agbanwe na ntanetị eletrik. Ọ na-echekwa ume na ọkwa MW. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-ahụ superconductor, flywheels ma ọ bụ batrị. A na-eji nke ikpeazụ n'ọtụtụ ebe n'ụwa nke ike anyanwụ maka ụbọchị na-adịghị arụpụta ihe.
Nchekwa nke ndị ahịa ikpeazụ. Ha bụ akpịrịkpa pere mpe na ngalaba ebe ị na-arụ ọrụ na kW. Anyị nwere ike ịchọta batrị ma yie nke gara aga mana obere ike echekwara. Dịka ọmụmaatụ, batrị maka ekwentị mkpanaaka, maka telivishọn, dịka ọmụmaatụ.
Ihe kpatara na ikwesiri ịchekwa ike
Ya mere, ike kwesiri ịchekwa ma ihe ndị a bụ ihe atọ mere o ji dị oke mkpa:
Ọ bụrụ na anyị echekwala ike, anyị nwere ike iji ya n’achọghị grid eletrik. Nke a na-akpata nnyefe nwee nkwa na ogo ka mma.
Mme ume ohuru na-abawanye n’ime ahịa ha ka usoro nchekwa na-abawanye. Cheedị na ị ga - ewepụta ike gị niile na - enweghị oke, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu, dị ọcha ma na - enweghị mmetọ na, karịa ihe niile, inwe ike ịchekwa ya. N'ụzọ dị otú a enwere ike iji ya mgbe ọ bụla achọrọ ya n'enweghị nsogbu. Mme ume ọhụrụ ga-arụsi ọrụ ike na ngalaba a ka ọ gbanwee karịa.
Ọ na-amalite ihe SmartGrid. Ọ bụ smart okporo na-enye anyị ohere bidirectional ike. Nke ahụ bụ, iji nwee ike ịgbanwe ụlọ na azụmaahịa gaa na obere ndị na-emepụta ihe. Site na ume ohuru, enwere ike iwepụta ọkụ eletrik ma njupụta a na-enye na ọkụ eletrik ma ọ bụ nata ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Ina na nchekwa
N'ozuzu, ume kwesịrị ịchekwa n'ihi na anyị ezighi ezi n'etiti usoro na usoro oriri. Ebumnuche nke ike bụ ka anyị dịrị mgbe anyị chọrọ ya. O nweghi uru anyị bara iji nwee oghere igwe na-enye anyị ọkụ eletrik n’ehihie, mana enweghị ike ịrụ ọrụ n’abalị. N'ihi usoro nchekwa, anyị nwere ike ịchekwa ike e mepụtara n’ehihie ma were ya n’enweghị anyanwụ.
N'ihe banyere ume ọhụrụ, nchekwa na-adabere kpamkpam na mmiri sitere n'okike. Nke a na - akpata na mmepụta ya anaghị agbanwe oge anyị chọrọ ya. Ihe atụ ọzọ nke a bụ ike ikuku. Ikwesiri iche na ọ naghị eme otu ikuku ikuku mgbe niile. Ọ bụ ezie na anyị nọ n’ebe ikuku na-efekarị, ọ naghị enwe otu ike mgbe niile. N'okwu a, ọ bụrụ na anyị nwere ezigbo ikuku nke ikuku ma anyị nwere ike ịchekwa ike ahụ, anyị agaghị enwe nsogbu ọ bụla na ọkọnọ mgbe oke ikuku anaghị efe. Ya mere, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọkụ eletrik na-enweghị nkwụsị.
Ebumnuche nke sistemụ nchekwa na-ebuwanye n'uche bụ ịkwalite ma mee ka ọtụtụ ihe ndị nwere ike imegharị ọhụrụ.
Chekwa ume abụghị ihe ọhụrụ
Oringchekwa ike abụghị nkà na ụzụ ọhụrụ. Enwere batrị acid ndu nwere ihe karịrị otu narị afọ. Kemgbe ọtụtụ afọ, site na mmalite nke teknụzụ, e mepụtara ma mezie usoro. Andrụ ọrụ na ojiji ejirila ịba ụba iji nweta nkasi obi kachasị mma na ntụgharị mgbe a bịara n'ịchọrọ ume.
Ọ bụ nke a na usoro nchekwa ndị a eruolarị ụwa nke nwere ike imeghari ohuru ma na-anwa imezi ha. Ọdịnihu nke ike dabere na sistemụ ndị a n'agbanyeghị na enyeghị ya mkpa ọ dị. Na ume mmeghari ohuru di ka odi ike, a gha-ekwe nkwa inye ya mgbe niile. Na mgbakwunye, ọ gaghị emerụ ihe ọ bụla ma anyị ga-alụ ọgụ maka mmetụta na-emebi ihe nke mgbanwe ihu igwe n'ụwa niile.
Otu n'ime usoro nchekwa nke na-enweta ike kachasị, nke a ga-abụkwa ọdịnihu n'ịchịkọta maka ume ọhụrụ (yana enwere ike bụrụkwa maka ụgbọ ala eletrik) bụ Batrị Lithium ion. Ya price bụ nnọọ elu. Mana n'ihi oke ibu ya na arụmọrụ ya ọ nwere ike bụrụ onye mbụ.
Dị ka a pụrụ ịhụ, ịchekwa ike bụ ihe dị mkpa na sistemụ eletriki nke ọdịnihu. Ọ bụghị naanị maka ọdịnihu, kamakwa nke ugbu a ebe a na-achọwanyewanye ume maka ume ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Sistem nchekwa nchekwa
Cofrentes ike nuklia